futako Tamagawa | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > futako Tamagawa
टोकियोका धनि मानिसहरु कता बस्छन ? हेर्नुस यी धनि मानिस बस्ने ६ एरिया
टोकियो विस्वकै महँगो सहरहरु मध्य एक हो। अब सोच्नुस टोकियोको पनि धनि मनि मानिस बस्ने ठाउँ कस्तो होला र कति खर्च लाग्ला। पर्यटकहरु धेरैजसो शिन्जुकु र शिबुयाको व्यस्तता मात्र देखेका हुन्छन तर यी टोकियोमा बस्ने ठाउँ भन्दा पनि मार्केट हबको लागि बढी चिनिन्छ। तल दिईएका ६ ठाउँ टोकियोका निकै महँगो ठाउँहरुमा पर्छन। अनि यहाँ बस्ने…
जापानमा आश्चर्यजनक रुपमा थोरै ५ तारे लक्जरी होटल छन्। किन होला? 2020-01-22
हजुरहरुले थाहा पाउनुपर्ने केहि जापानी लेखक 2020-01-23
जापानमा महिलाहरु जापानी रक्सि बनाउन महारथ हाशिल गर्दै 2020-03-11
हानेदा कि नारिता एयरपोर्ट, कुन चाही छान्दा राम्रो? 2020-03-18
के हजुरलाई गर्मि महिनामा प्रयोग हुने यी बेसिक जापानी शब्दहरु थाह छ ?
जापानको नौलो र नबिन प्रबिधि र “कुरा सुशी”
जापानमा रहेको “द स्ट्याचु अफ लिबर्टी”
एक्सप्लोर जापान : आकिता संस्कृति, गेइश्या र खाना
ओकिनावा किन जाडो महिनामा जादा उत्तम हुन्छ